IiTV ezilungileyo zika-2017 onokuzithenga | Iindaba zeGajethi
UJose Alfocea | | ZeThelevishini
Uninzi lwethu sonke luyakuthanda ukukwazi ukonwabela iimuvi zethu esizithandayo, uthotho kunye nemidlalo kumabonwakude olungileyo ekhaya, kunye nescreen esikhulu kunye nomfanekiso olungileyo kunye nomgangatho wesandi, kodwa asizimisele kushiya ikhadi lethu letyala lingcangcazela nokuba. Ngethamsanqa, iithelevishini ziludidi lwemveliso esingaluhlaziyiyo minyaka le, njengoko kuhlala kunjalo ngee-smartphones, kodwa sizithenga ngenjongo yomjikelo wobomi weminyaka emihlanu ukuya kwelishumi. Kwaye oku kusinika inzuzo enkulu ngaphaya kwento yokuba, kuthintela intlekele, kuya kuthatha ixesha elide ukutyala imali kumabonwakude kwakhona.
Olo ncedo alunto yimbi ngaphandle kwamandla Yonwabela i-TV ekumgangatho ophezulu ngexabiso elifanelekileyo, kwaye oku, into elula njengokujonga oomabonakude abaphume kunyaka ophelileyo. Ngokubanzi, nayiphi na Iithelevishini ezilungileyo zika-2016 banomahluko omncinci kwiimodeli ezivele kulo nyaka, nangona kunjalo, sinokugcina imali elungileyo, umzekelo, esinokwabela ukufumana inkqubo yesandi, umdlali weBluRay omtsha, asihlawule intwana yeentlawulo zeNetflix zenyanga nenyanga, okanye Nokuba uziva njani. Ke, ukukunika isandla kwimishini yokuphamba, namhlanje sikulethela ukhetho kunye nezinye ze Iithelevishini ezilungileyo kakhulu zango-2016 elona xabiso libalaseleyo.
3 Isamsung UE49KS8000
6 Isamsung UE55KS7000
8 Isamsung UE65KS9000
9 UPhilips 43PUH6101
10 Umgangatho ophezulu: LG 43LH590V
Siqala ngale nto I-Sony ZD9, umabonwakude okhoyo ngobukhulu bescreen (i-65, 75 kunye ne-intshi ye-100 intshi), ke ayilungelanga amagumbi amancinci. Lumka, kuba ixabiso lalo liphezulu, kodwa nomgangatho walo. Bala kunye Uyilo olucocekileyo nolumnandi, 4K isisombululo iyahambelana ne eyeInkqubo yokukhanyisa I-Backlight Master Drayivu, Iprosesa yomfanekiso weX1 oGqithisileyo, yiza, uya konwaba ngowona mgangatho womfanekiso. Ukongeza, idibanisa i-TV ye-Android ukuze ube nokusebenzisa uninzi lwezicelo.
Ngobukhulu obucekeceke kakhulu sinomabonakude wePanasonic TX-40DXU601, isixhobo esine Iscreen se-IPS se-intshi ezingama-40 kunye nesisombululo esikwaziyo ukufikelela kwiiphikseli ze-4K UHD 3.840 x 2.160. Ewe, uyilo nalo lutsala umdla wethu, kunye nezakhelo ezincinci kakhulu kunye neenyawo ezintle ezibethwe. Ewe kunjalo, ngokungafaniyo naleyo yangaphambili, le modeli ayihambelani nomxholo we-HDR kodwa kunjalo, umgangatho ulunge ngendlela emangalisayo, ubandakanya Firefox njengenkqubo yokusebenza ye-Smart TV kwaye inenombolo elungileyo kunye neendidi zonxibelelwano ze-USB, HDMI, Ethernet kunye nokunye.
Siya eSouth Korea ukuze sithethe ngale Samsung UE49KS8000, umabonwakude onayo Iscreen se-intshi eyi-49 (ikwafumaneka kwii-intshi ezingama-55 no-65) ngesisombululo I-4K UHD, Itekhnoloji yombala we-Quantum Dot, inkqubo ye-HDR 1000, ngokudibeneyo, isinika umgangatho womfanekiso ongenakulinganiswa, kunye nabantsundu abanzulu, imibala eqaqambe kakhulu nenamandla ...
Inkqubo ye-smart TV inenkqubo yokusebenza Tizen OS (ukusuka kwindlu ngokwayo), kwaye ikwanazo iintlobo ezahlukeneyo kunye nobungakanani bezinxibelelanisi ukuze ukwazi ukudibanisa ezinye izixhobo: i-HDMI, i-USB, iWiFi, i-Ethernet ...
Olunye ukhetho oluphezulu lomgangatho yile Akukho mveliso ifunyenweyo, umabonwakude nge Isikrini se-OLED esingama-intshi ezingama-65 kunye nesisombululo esikhulu I-4K UHD ngenkqubo yeDolby Vision HDR. Enkosi kule paneli, abamnyama baya kuba zezona zinzulu okhe wazibona, izithunzi ziya kuchazwa kakuhle kwaye imibala iya kubonakala ngokucacileyo nangokuqaqambileyo.
Ikwayimabonwakude ibhitye kakhulu ekwanayo nenkqubo yesandi elungileyo eyilelwe nguHarman Kardon, uninzi lwezihlanganisi kunye ne-Smart TV enenkqubo yokusebenza yewebhu. Ewe ixabiso layo lisalele kubasebenzisi abaninzi.
Siqhubela phambili kukhetho lwethu lweeTV ezilungileyo zika-2016 ngale Sony KDL-40WD650, iTV enamandla nenhle, hayi ezo zibonelela ngexabiso eliphantsi nelinomdla. Inefayile ye- Isikrini se-intshi ezingama-40as ngesisombululo esipheleleyo seHD Iipikseli ze-1.920 x 1.080 ngenkqubo ye-Motionflow XR + kunye neprosesa yomfanekiso we-X-Reality Pro, iqela lamagama angaqhelekanga aguqulela kumgangatho ophezulu womfanekiso kwigumbi lokuhlala okanye kwigumbi lokulala.
Su umfanekiso ucacile, ubukhali, kunye nabamhlophe abacocekileyo, abaqaqambileyo, kwaye abafani, abamnyama banzulu. Kwaye konke oku ngaphandle kwesisombululo se-4K.
Ikwaqaqambisa iifayile zayo uyilo, intle, intle, eqheleke kakhulu kwiJapan yaseSony. Ungazilibali izibuko zayo ezimbini ze-USB, igalelo layo le-Ethernet, amazibuko ayo amabini e-HDMI, iWiFi edityanisiweyo kunye nenkqubo Smart TV.
Siyaqhubeka nenye imodeli yethelevishini yaseMzantsi Korea, le Isamsung UE55KS7000, Umabonakude omnandi we-intshi ezingama-55 4K UHD Iipikseli ezingama-3.840 x 2.160 ngenkqubo eye Ikwasebenzisa iteknoloji Umbala weDotum Dot, iguqulela kwi imibala engaphezu kwewaka lezigidikunye umfanekiso ocacileyo, ococekileyo, obukhali, ochazwe kakuhle, enemibala eqaqambileyo, abamhlophe abaqaqambileyo nabamnyama abamangalisayo.
Kwaye njengesiqhelo kwifemi, izihlanganisi zigqame kokubini ngokwahluka nakubungakanani (I-USB, i-HDMI, i-Ethernet ...), ikwanokunxibelelana kwe-WiFi ngokudibeneyo kunye Smart TV ngenkqubo yokusebenza ye-Tizen OS.
Siphinda uphawu lwelizwe kunye nelizwe kuba kwakhona kufuneka sikhankanye iTV evela eMzantsi Korea LG, ngeli xesha imodeli I-LG OLED55C6V, isixhobo esidibanisa iphaneli enkulu kunye netekhnoloji ye-LG OLED kunye nobukhulu be 55 intshi. Ayitsho into yokuba le ngumabonakude kwabo bangahlali nantoni na, kodwa befuna owona mgangatho ubalaseleyo womfanekiso. Kungenxa yoko le nto, enkosi yetekhnoloji ye-OLED, unganamava amnyama anzulu ongazange wacinga ngaphambili, ubukhali obumangalisayo kunye nokucaca, kunye nemibala eqaqambileyo, eqaqambileyo, eqaqambileyo. Ewe inika Isisombululo se-4H UHD ngenkxaso yomxholo we-HDR iDolby Vision, Ke ngoku ungonwabela olona mgangatho uphezulu kuthotho lwakho oluthandayo kunye neemovie.
Ukongeza, le TV ye-LG OLED55C6V ikwabonelela ngeendlela ezininzi zonxibelelwano (i-Ethernet, iWiFi, amazibuko amathathu e-USB, ezinye izihlanganisi ezintathu ze-HDMI) ukuze ukwazi ukudibanisa izixhobo ezininzi.
Kwaye siyaqhubeka ngaphandle kokuhamba ukusuka kwimida yaseMzantsi Korea ukukhankanya enye imodeli ye-Samsung kwaye le nkampani, kunye ne-LG, uyabona ukuba bathatha ikhekhe ngokweethelevishini ezingcono.
Ngeli xesha siza kubhekisa kulo Isamsung UE65KS9000, i "super TV" apho kuya kufuneka ube negumbi lokuhlala elifanelekileyo njengoko liqukethe enkulu Iscreen se-intshi eyi-65 kunye nesisombululo 4K UHD ixhotywe ngeyona teknoloji ibalaseleyo kwinkampani: itekhnoloji Umnyama omnyama ephepha ukubonakalisa, itekhnoloji, Umbala weDotum Dot esele sithethe ngayo ngasentla, inkqubo Inqanaba eliphambili lokukhanyisa ukufezekisa ukuqaqamba okumangalisa ngokwenene, injini yokulinganisa Injini yokuhlaziya i-SUHD inoxanduva lokuphucula umgangatho kunye nokusonjululwa komfanekiso xa unesisombululo esisezantsi kwaye, kunjalo, nenkqubo I-HDR 1000.
Kwaye konke oku malunga nomtsalane Iphaneli egobile ezakukubonelela ngamava obuqu, apheleleyo kunye notyalo mali, kwaye unokwandisa umbulelo kunxibelelwano lwayo lwe-WiFi kunye ne-Ethernet, okanye amazibuko amathathu e-USB kunye nezihlanganisi zayo ezintathu ze-HDMI.
Yhu, ndiphantse ndalibala! Nge-Samsung UE65KS9000 ungonwabela uninzi lweeapps zakho ozithandayo kuba inkqubo Smart TV Ine-Tizen OS njengenkqubo yokusebenza.
Kodwa ayinguye wonke umntu kwihlabathi likamabonakude ajika eSony, LG, okanye iSamsung, nayo iPhilips, mvanje eyaziwa ngcono ngeebhalbhu zayo zokukhanya kwaye siza kuzisika zonke iintlobo, inento enokuyithetha ngayo nomabonwakude UPhilips 43PUH6101, isixhobo esimangalisayo esinesikrini I-intshi ye-43 ye-LED kunye nesisombululo se-4K (3840 x 2160) ebandakanya Smart TV ukuze ukonwabele umxholo owuthanda kakhulu kumaqonga anjengeNetflix okanye i-HBO ngqo, ngaphandle kwesibuko okanye nantoni na enjalo.
Yimalini nayo Isisombululo esiphakamileyo setekhnoloji, ukuze ukonwabele olona mgangatho uphezulu nokuba imifanekiso ibonelela ngesisombululo esisezantsi.
Asinakho ukubeka ecaleni eyakho uyilo, ezintle kunye nezala maxesha, phantse ngaphandle kwezakhelo, kunye neenyawo ezithetha konke ukuqaqamba kwiscreen. Kodwa elona lilungileyo kuzo zonke lixabiso lalo, ngaba ucinga ukuba unomabonwakude onje malunga namakhulu amane ee-euro? Ewe ewe kunokwenzeka.
Ngaba ufuna ngaphezulu? Isandi esijikeleze indawo, ulawulo lwesandi esikrelekrele, iaudiyo ene-16 W yamandla, izixhumi ezine ze-HDMI, izihlanganisi ezintathu ze-USB, uqhagamshelo lweWiFi, ukuphuma komsindo wedijithali (i-optical), i-Ethernet nokunye okuninzi ukuguqula le TV ibe Olunye lolona khetho lubalaseleyo kumgangatho wexabiso - amaxabiso.
Kwaye sigqiba ngomnye umabonakude osemgangathweni ophezulu kunye nexabiso elifikelelekayo. Njengangaphambili, le I-LG 43LH590V 43 "HD epheleleyo ... Ikwajikeleze amakhulu amane eeuros (ngamanye amaxesha nangaphantsi).
Le modeli ye-LG isinika isikrini se- 43 intshi ngesisombululo HD Pheleleyo (1920 x 1080 pixels), iWifi kunye ne-Ethernet, Smart TV ngenkqubo ye-webOS, amazibuko amabini e-HDMI, izibuko le-USB kunye noyilo oluthe kratya.
Ngokunikwa ukhetho, ngokungathandabuzekiyo imodeli yangaphambili yePhilips ibonelela ngomgangatho ophezulu womfanekiso kunye nokukhethwa kokunxibelelana okukhulu, nangona kunjalo, ukuba kukho umahluko omkhulu wexabiso ngexesha lokuthenga kwakho, uhlahlo-lwabiwo mali lumi kwaye awudingi unxibelelwano oluninzi kakhulu ukhetho olufanelekileyo.
Ukuza kuthi ga ngoku ukukhetha kwethu nge ezinye zeTV ezilungileyo zika-2016. Khumbula ukuba esi sisindululo nje kuba kukho intengiso ebanzi kwintengiso, ngamanye amaxesha, yeemveliso ezincinci kakhulu ezaziwayo kodwa umgangatho wazo ungasothusa. Kwimeko nayiphi na into, thelekisa kakuhle xa ukhetha iTV entsha ngokweemfuno zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » ZeThelevishini » IiTV ezilungileyo zika-2016